Columbina Rural Service Center inzvimbo yemabhizimusi, iri mukati mechikamu cheZhombe chinoitwa hushangazhi hwakasiyana siyana. Paimboizikanwa sepaMachipisa kare; nhasi panozikanwa seEmpress, kunyange zvayo Empress Growth Point iri chinhabwe chinosvika 4km kuChamhembe kweColumbina Rural Service Center. Umu muMidlands muZimbabwe
Nzvimbo ino iri parumbariro nehunhungo -18.4468360S; 26.4447070E pakutarwa kwenyika.
Zita rokuti Columbina rakauya nevaichera ndarama panzvimbo iyi yavaiti Columbina Mine. Columbine iri nzvimbo iri kunyika dzinonzi United States of America.
Columbina Rural Service Center inowanikwa pa '45km Peg' muMugwagwa unobatanidza Mugwagwa-Kwekwe-Gokwe pamwechete noMugwagwa-Kwekwe-Kadoma uchipfuura nepaVenice Mine. Kubva pano kuenda kuKadoma pane 67km nemugwagwa, kana kuti 51km nemudenga wakananga KuMaodzanyemba kwakadziva kuMabvazuva.
Guta reKwekwe riri 98km nomugwagwa uchipfuura nokuVenice Mine, kana 66km nemudenga wakananga KuChamhembe kwakadziva kuMabvazuva.
Gokwe Center iri 86km nomugwagwa, kana 57km nomudenga wakananga KuMaodzanyemba kwakadziva kuMadokero.
'Growth Point' Zhombe-Joel iri 44km nemugwagwa unetara, uyo unopfuua nekuChemagora; kana kuti 36km nomugwagwa unodimbudzira nokuSenkwasi.
Ngondoma Irrigation Scheme iriwo chinhambwe chinokwana 4km kubva pano.
'Columbina Rural Service Center' iri mumusha unobatwa naSabhuku Mahogo, pasi paShe Samambwa; muWadhi 6 (Mabura Ward).
Mabhizinisi epano anovimba nevatengi vanobva mu Empress Growth Point , Ngondoma Irrigation Scheme, Commoner Mine Houses nemisha yakakomberedza.
Mvura inowanikwa pazvibhorani zviviri zviri pedyo, pamwe nokumukoronga (canal) unofambisa mvura inoenda kuminda inoita zvokudiridzirwa yeNgondoma Irrigation Scheme ichibva kuDhamu Ngondoma. Parizvino Kanzuru yakabatana neZINWA vari mubishi rokuisa pombi dzemvura panzvimbo ino. Matanghi emvura ari kutovakwa, uye mvura inotarisirwa kunge yavapo muna Ndira 2016.
Mugwagwa unopfuura nepano uneTara asi wasakadzwa nouhwandu hwemazimota anotakura zvinorema anopfuura napano siku nesikati.
Nzvimbo iyi inotarisirwa kuzobatana ne Empress Growth Point kuva guta diki rokutanga muruwa rweZhombe .
Columbina Rural Service Center English Version
Empress Mine Township, Zimbabwe English Version
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Columbina_Rural_Service_Center&oldid=43534"
This page was last edited on 26 Mbudzi 2015, at 11:14.